Media sy Fanoratan-gazety · Aogositra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Aogositra, 2011
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Aogositra, 2011
Fetiben'ny Bilaogy: Meksika – Ny Fampahalalam-Baovaon'Olon-tsotra Eny An-tsehatra
Amerika Latina 31 Aogositra 2011
Ity no ampahany faharoa amin'ny tatitra momba ny Fetiben'ny Bilaogy 2011 mamintina ny fomba fijerin'ireo bilaogera Meksikana ny fomba fampiasàna ny mediam-bahoaka hitaterana ny herisetra, ary ambonin'ny zavatra rehetra, ny anjara toerana tànan'ny fampahalalam-baovaon'olon-tsotra ao anatin'io sehatra mahery setra io.
Fetiben'ny Bilaogy: Meksika – Midradradràdra Ny Herisetra
Amerika Latina 30 Aogositra 2011
Ny Fetiben'ny Bilaogy 2011 nataonay voalohany dia nitondra ny lohahevitra hoe "Meksika - Vahoaka, Herisetra ary Bilaogy". Ao anatin'ny ampahany voalohany amin'ny famintinana farany, arantinay ny fihevitr'ireo Meksikana mpitoraka bilaogy momba ireo tranganà herisetra nitranga taloha tao amin'ny fireneny sy ny fomba andraisan-dry zareo izany ary anehoany ny fangirifiriany rehefa mahadòna azy ireo ilay herisetra.
Shily: Fiaraha-miasa vaovao eo amin'ny Global Voices sy ny Mi Voz
Amerika Latina 24 Aogositra 2011
Nanorina fiaraha-miasa vaovao ny Global Voices sy ny Mi Voz – gazety an-tseraseran'olo-tsotra Shiliana – . Hamoaka tantara iray avy ao amin'ny Mi Voz isam-bolana ny Global Voices, mba hahatakatra ny mpamaky iraisampirenena ny feon’ ireo olotsotra mifandray aminy. Mandritra izany kosa ny Mi Voz dia hamoaka lahatsoratra novolavolain'ny Global Voices...
Libya: Tapatapaka ny fandaharan'ny fahitalavi-panjakana libyana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 22 Aogositra 2011
Satria mihazakazaka ny fandehan'ny raharaha avy any Tripoli dia manely ny vaovao farany avy ao Libya ny mafana fo avy ao amin'ny valan-tserasera mba hahalalantsika marina izay mitranga ao. Aza miala eto hanarahanao ny antsipiriam-baovao.
Libya: Mahatsiaro an'i Mohammed Nabbous
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Aogositra 2011
Miely ao amin'ny Twitter ny fahatsiarovana an'i Mohammed Nabbous, mpanorina ny televiziona Libyana AlHurra TV. Maty nandritra ny fifampitifirana nalainy sary tamin'ny 19 Marsa i Nabbous. Araka ny nolazain'ny mpankasitraka azy moa dia mankalaza ny fivoaran'ny toe-draharaha any Libya ny fanahin'i Nabbous.
Trinite & Tobago: Fahatsiarovana An'i Profesora Julian Kenny
Karaiba 21 Aogositra 2011
Ny Talata lasa teo, 9 Aogositra,Trinité sy Tobago dia very tia tanindrazana iray. Julian Kenny, Profesora momba ny valan-javabohary tao St. Augustine Augustine ao amin'ny Oniversite an'i West Indies, fa efa nisotro ronona, natoralista, Senatera tsy miankina teo aloha tamin'ny Parlemanta fahadimy sy fahaenin'ny Repoblikan'i Trinité sy Tobago, mpanoratra , mpanao lahatsoratra an-gazety, mpaka sary sy nahazo ny Medaly lehibe Chaconia (Volamena ) noho ny fiarovana ny tontolo iainana , maty teo amin'ny faha 81 taonany. Ilay vaovao mampalahelo dia niparitaka be teo noho eo tamin'ny alalan'ny filazam-baovao ara-piarahamonina, miaraka amin'ireo mpianatra teo aloha nandefa lahatsoratra ho fanomezam-boninahitra noho ny lova navelany.
Miasa miaraka Amin'ny Ashoka ny Global Voices Amin'ny Fifaninanana Fampitam-baovao an'olotsotra
Fahalalahàna miteny 20 Aogositra 2011
Voninahitra ho an'ny Global Voices ny miasa miaraka amin'ny mpanova Ashoka amin'ny ‘Fifaninanana fampivoarana ny fitaovan-tseraseran'olo-tsotra' iarahana amin'ny Google. Mpandresy efatra no hahazo loka 5.000 dolara amerikana avy amin'ny tetikasan'olo-tsotra mampita vaovao manao izay hahatonga ny tany ho toerana tsara kokoa.
Bangladesh: Fahafatesana Mahatsiravina Niteraka Fanarahamaso akaiky ny an-dalambe
Azia Atsimo 16 Aogositra 2011
Nahatohina ny Bangladeshi mafy tokoa ny fahafatesana tampoka nahazo ilaytale nahazo loka taminà famokarana sarimihetsika Tareque Masud sy ilay mpaka sary (cameraman) fanta-daza maneran-tany sady mpanao gazety amin'ny fahitalavitra Ashfaque Munier Mishuk tanaty lozam-pifamoivoizana. Misaona ny fahafatesan'izy ireo ny mponin'ny aterineto sady manontany mikasika ny fiarovana eny amin'ireo làlambe Bangladeshi.
Karaiba: Fanehoan-kevitra Tanàty Aterineto Mikasika Ny Fianjeran'Ilay Fiaramanidina Tany Guyana
Karaiba 14 Aogositra 2011
Rehefa nipoaka ny vaovao ny voalohandohan'ny Sabotsy fa nisy fiaramanidin'ny Caribbean Airlines nianjera tany amin'ny Seranam-piaramidina Iraisam-pirenenan'i Cheddi Jagan tany Timehri, Guyana, nipetraka ny tontolon'ny bilaogim-paritra ary nandray an-tsoratra. Tao anatin'ny tantaran'ny faha-71 taonany, nidoka tena ho manana fiarovana tsy azo kianina ny zotram-piaramanidina mandra-pitrangan'ity loza ity.
Rosia: Mitantara Ny Kolikoly Ao Amin'ny Sampam-Pampianarana Ny Asa Fanaovan-gazety Ao Mosko Ireo Mpitoraka Bilaogy
Eoropa Afovoany & Atsinanana 14 Aogositra 2011
Tantarana mpitoraka bilaogy iray izay nahavita namaky bantsilana ny kolikoly ao amin'ny sampam-pampianarana ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny anjerimanontolom-panjakana ao Mosko (MGU) izy ity. Toa tsy mampino sy tsy hisy mihitsy izany, manodidina ny fanadinana fidirana ho ao amin'ilay anjerimanontolo tena matanjaka sy malaza ho tsara indrindra ao Rosia izy ity, na dia hoe mety ho izany ihany koa aza angamba no singa tena itrangan'ny kolikoly indrindra eo amin'ny rafitry ny fampianarana ambony ao amin'ny firenena.